The Irrawaddy's Blog: ဧည့်စာရင်း တိုင်ရမယ်
ကြည့်ချင်တဲ့ပုံပေါ် Right Click တချက် နှိပ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ စာတန်းတွေထဲက Open link in new tab ဆိုတာ ထပ်နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီပုံက စာမျက်နှာအသစ်မှာ ပွင့်နေပါလိမ့်မယ်။ ကြည့်တဲ့အခါ သေးနေတယ် ဆိုရင် ပုံကို ချဲ့ဖို့ တချက် ထပ်နှိပ်ရပါမယ်။)
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ တဲ့။ သမ္မတကြီးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဒီဥပဒေကို ဒီနေ့သတင်းစာထဲမှာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ တာဝန်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာတွေလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်းတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်မှာပါ
(အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် စစ်ရေးအတွေ့အကြုံ ရှိရမည် ဆိုတာတော့ မပါပါဘူး)
သူကြီးတို့ရဲ့ သက်တမ်းဟာ လွှတ်တော်သက်တမ်းအတိုင်း ဖြစ်ရမယ်၊ ၃ ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ဖြစ်နေရင် ပါတီကထွက်ရမယ်လို့ ဆိုမထားပေမယ့် ပါတီတာဝန်တွေ မထမ်းဆောင်ရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့အတွက် အရေးကြီးတာတွေ ပါပါပြီ။ ဧည့်စာရင်း တိုင်ရမယ် တဲ့။ ဧည့်သည်ပြန်ရင်လည်း အကြောင်းကြားရမယ် ဆိုပဲ။
ပျက်ကွက်ရင် ကျပ် ငါးထောင်ထက် မပိုတဲ့ ဒဏ်ငွေ ချခံရမယ်။ ငွေမပေးရင် သံတိုင်နောက် ခဏ သွားနေရမယ် တဲ့။
Posted in: Document , အချက်အလက်
ဧည်.စာ၇င်းတိုင်၇မယ် ဆိုတာက မြန်မာလူမျိုးတွေကို ငတုံးတွေဆိုပြီး၊ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေကြတယ်လို. င်ပါတယ်။ ဒီမိုကေ၇စီမှာ လွတ်လပ်စွာ ရွေ.ရှားသွားလာပိုင်ခွင်.မရှိတောဘူးလားဟေ.။ ပညာတတ်တွေနဲတယ်ဆိုပြီး မတ၇ားသဖြင်. ဆွဲချင်တဲ.ဇယားတွေ ဆွဲချင်သလို ဆွဲနေကြတာက ဒီမိုကေ၇စီအတုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ၊ ဧည်.စာ၇င်း မတိုင်၇ဘူး။ ကော်မြုနစ် စံနစ်တို. ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ဆိုမှာသာ ဘယ်သူ.ကိုမှ မယုံကြလို. human rights မရှိကြလို. စည်းကမ်းကပ်သပ်ချက်တွေ တင်းကြပ်ထားပြီး ၇ာထူးမက်မောမှု စိတ္တဇ တွေကြောင်.ပါ။ မဟာအမှားကြီးတော. ဖြစ်နေပြီ။ ကြည်.လုပ်ကြဦးဆ၇ာတို.ေ၇။
So stupid rule.Even daughter go to parent house do they still have to report? What kind of idiot government?
MassMovementCommittee (MMC) said... :
အဲလာ မီးလို့ ကိစ္စလေ ၀လို့ ပြည်ကြီး တရုတ်ပါဘူး
မီးလို့ ရပ်ကွက် လူချီး မီပြောလဲ့ မီးလို့ အီဖေတွေတောင်
၀ပြောစကားပဲနားထောင်နေရတာ အီးလာလည် ၀လုပ်ခိုင်းလာပေါ့ မီးလို့ ရွေးကာက်ပွဲ စည်းရှုံးရေး ဆင်းရင် အရင်ဆုံးရပ်ကွက်လူချီးနဲ့တွေ့မယ် နားလီလား
ကျွန်မတို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ ဧည့်စာရင်းလာတိုင်ပါဆိုလို့ သွားတိုင်ကြပါတယ်။ ရုံးရောက်တော့ ည ၈နာရီကျော် နေပြီ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ရာအိမ်မှူးက မရှိကြပါဘူး။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောက်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာရေးက ရာအိမ်မှူးမရှိတဲ့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ၀င်တွေ့ခိုင်း ပါတယ်။ ၀င်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မြို့နယ်က ကျွန်မတို့ကို ထောက်ခံစာ ပေးမှသာ သူက ဧည့်စာရင်းပေးနိုင် မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မက စမ်းချောင်း(တောင်)မှာ နေလာတာ ၇နှစ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ တခါမှ ဒီလိုလုပ်ရတယ်လို့ မကြားမိ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့အထူးအဆန်းပေါ့။ အံ့သြတကြီးနဲ့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဆို ဧည့်စာရင်းမပေးနိုင်ဘူးလာလို့ပါ။ မပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ရာအိမ်မှူးနဲ့မြို့နယ်ကိုသွားပါ။ သွားယူလိုက်ပါတဲ့။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တာဝန်မယူ နိုင်လို့တဲ့။ အဲဒါဆို ဒီရပ်ကွက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူးကို ဘာလို့ယူထားတာလဲလို့ မေးချင်ပေမဲ့ ကျွန်မက သူ့လက်ခုပ်ထဲက ရေဖြစ်နေပြီလေ။ နောက်တော့ ရာအိမ်မှူးကို ခေါ်ခိုင်းပြီး ရာအိမ်မှူးနဲ့ ညှိလိုက်ပါတဲ့။ ရာအိမ်မှူးကိုလဲ ကုန်ကျစရိတ်ယူပြီး ကြည့်လုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သား မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ ဒီလောက်ခက်နေတယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတာကတော့ ကျွန်မအတွက် ရီစရာ မဟုတ်ပါလား။ လူတွေရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေ မပျောက်သရွေ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပါးစပ်ထဲမှာတောင် ပြောဖို့မသင့်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကော နားလည်ကြရဲ့လားမသိပါဘူး အုပ်ချုပ်သူများရယ်.. နောက်တော့ ညှိလိုက်ပါတယ်.. သူတို့က ရဲတွေကိုး...၅၀၀၀ ကျပ်ပေးပြီးတော့လေ... မကျေမနပ်နဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဧည့်စာရင်းဒီလောက်ခက်ခဲ့သလားလို့....... တခြားနိုင်ငံက လာသည်လည်းမဟုတ်...
မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ
၁ ဧည့်စာရင်း တိုင်ရမယ်။
၂ ပြက်ခဒိန် မဝယ်မနေရ ဝယ်ရမယ်။
၃ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရင် ပေါတာ လိုက်ရမယ်။
၄ စစ်တပ်က စိတ်ကြိုက်နေရာမှာ လယ်သိမ်းမယ်။
မိန်းမ နှစ် ယောက် အိမ် သွား အိပ် လို့ မရတော့ ဘူး
I feel ashamed on these lunatic and uneducated people who are destroying the country. They think they are clever enough to control visitors or guests who are honest people visiting their relatives. Whatever resons they have it doesn't matter. People have got the right to visit and stay forashort period anyway. Why reporting the Quarter Council and the Police department and give fees to report. These are socialist manners and bad habits. We have no terrorist in the country either. The government spentalot of money on spiring business and hasavery top NIB and CID people around the country. So they can easily catch these people who are planning to do something bad. Why reporting of visitor/guest list? I must say they don't know what they are doing? They all confuse and they make the public confused too. What are they doing or where they are heading they don't even know. Whether you believe or not I do not know. They are makingafool to the public. This is my sincere opinion. It is the government's duty to safe guard the public. Not to give trouble to the public. Since 1962 we had to start reporting visitors' names to the Ward Council to date. Have we not changed any our system yet? Socialism had expired already. What are we doing now? Come on this is 2012. We should throw the olden ideas away.
Tomahawk said... :
If this rule is officially approve,
"we all must take it very very seriously to AGAINST this ridiculous rule."
Every citizen of Burma should go out to the streets in every cities and towns to PROTEST AGAINST THIS.
Any citizen must allow to go anywhere to travel without any violation of their human rights.
We are not terrorist, we do not have any gun but they do have it.
Why are they always trying to intimidate and abuse like this?
ဧည့်စာရင်းတိုင် ရတဲ့ ဒုက္ခ ဒီခေတ် လွတ်တော်အစိုးရ အမည်ခံ ခေတ်မှာ ရှိနေစဲ ဆိုရင် ဒါဟာ တကယ် အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှ မရှိပါဘူး။ ဒီစနစ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ထားဖို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူကို မယုံမကြည် သံသယမျက်လုံးနှင့် စောင့်ကြည်နေတာပါ။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားကို မတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမည့် ဥပဒေ ဗမာပြည်၊ မြန်မာပြည်၊ မှာ မရှိသင့်တော့ပါဘူး။
ဧည့်စာရင်း တိုင်ရမယ်ဆိုတာ ခေတ်မပြောင်းသေးဘူးကို ပြောတာပါ။ လူထုကို ဖိနိပ် အုပ်ချူပ်ထားလျှက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားထောက်ပြနေတာပါ။ အာဆီယံခေါင်းဆောင်နေရာ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလို ဧည့်စာရင်းတိုင်ပြီးရမည့် ဥပဒေကို အဆုံးတိုင် မြေမြုပ်သင့်ပါပြီး။
အဖိုးအိမ်ကို သွားလည်ရင် ဦးလေးအိမ်ကို သွားလည်ရင်၊ မောင်နှအိမ်ကို သွားလည်ရင် တောင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမယ်ဆိုတာ အသားလွတ်ဗိုလ်ကျနေတာပါ။ ငါတို့ စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ စီးပွားရေးခရိုနီတွေသာ ဗမာပြည်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပြောတာဖြစ်မယ်။ ဒါလား ဒီမိုကရေစီ။ လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ အာဏာရှင်ကရေစီ စနစ်သာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားတွေ ကြားရင် သိပ်ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စစ်တပ်က စစ်ပွဲမှာ အုပ်ချူပ်မှု့ ပုံစံနဲ့ တိုင်းပြည်ကို လူပါးဝနေတာပါ။ ဧည့်စားရင်တိုင်ပြီး လူတွေကို ထောင်ထဲထည့်၊ ရာဇဝတ်မှု့ တွေ ထူပြောအောင်လုပ်ပြီး ထောင်ထဲထည့်၊ ညမှောင်ရိပ်ခိုတယ်ဆိုပြီး တရားဥပဒေတွေ ပြဌာန်းနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
ဗမာပြည်သူတွေ သည်းခံ နေမှန်းသိလို့ဧည့်စားရင်းတိုင်ခိုင်းတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းနေတာ။ ဗမာပြည်သားနိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်လပ်စွာကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ သွားလာနိုင်ရမယ်။
ဧည့်စာရင်းဆိုလို့ အိန္ဒိယမှာ ကျနော်နေစဉ်က
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမသိတဲ့ ကျနော့် မိတ်ဆွေက ကျနော်နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်လိုက်ချင်တယ်။
ပြီးတော့ ကျနော် နဲ့ အတူတည်းခို နေမယ် ထိုင်မယ်
ပေါ့ဗျာ- ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံက ဧည့်စာရင်းအကြောင်း ရှင်းပြတော့ မိတ်ဆွေက ပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြတုန်းတဲ့-
ဒီဥပဒေ ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘယ်ပါတီအဖွဲ့စည်းက ဆန္ဒမပြတော့ဘူးလား...ဒီအတိုင်းဘဲ ပါတီများက ငြိမ်ခံနေတော့မှာလား...သမ္မတကြီးနဲ့ဝန်ကြီးများလည်း တခြားတနေရာသွားရင် ဧည့်စာရင်းတိုင် ထောက်ခံစာ မယူရတော့ဘူးလား...သူတို့အတွက် ဧည့်စာရင်း မတိုင်ရဘူးဆိုင် ဒီဥပဒေက ပြည်သူတွေအတွက် ပြဌါန်းဥပဒေမမြည်ပါ...ပြည်သူအတွက် ပြဌါန်းဥပဒေဆိုရင် သမ္မတဖြစ်ဖြစ် ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမှာဘဲ ထောက်ခံစာယူရမှာဘဲ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီမြည်ပြီး သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုယ့်လုပ်ပိုင့်ရှိမှာပေါ့..ပြည်သူတွေအတွက်ကျတော့ သူတို့စိတ်ကြိုက် ဥပဒေပြဌါန်းပြီး ကိုယ့်လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာက အခုပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို လက်မခံဘူး မထောက်ခံဘူး အာစီယမ်ဥက္ကဌ တာဝန်နဲ့လည်း မထိုက်တန်သေးဘူး...ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော အာဏာရှင်စနစ်ကို လျောက်လမ်းနေဆဲဘဲလို့မြင်တယ်...ပြည်သူတွေအားလုံး ယခုပြဌါန်းလိုက်သော ဥပဒေကို လက်မခံဘူးဆိုရင် အတူတကွလမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကျရအောင် လို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်... ..
VIP တွေ ဧည်.စာ၇င်းတိုင်၇င် င၇ဲအိုထဲ ဇောက်ထိုးကျမှာမို. ဧည်.စာ၇င်းမတိုင်၇ဘူးတဲ.။ ခွင်.ထူးခံ လူတန်းစားတွေဆိုတော.၊ အလိုအလျှောက် လိမ်မာပြီးသားပါ။ လူမိုက်တွေကိုပဲ တင်းကြပ်ထား၇မှာမို. ဧည်.စာ၇င်းကို မတိုင်ချင်ချင် တိုင်ချင်ချင် တိုင်၇တော.မှာပါလားကွယ်တို.ေ၇။ ဒီလူကြီးတွေကို ခင်မောင်၇င်၇ဲ. ဖာတစ်လုံး ခေါင်းကြား ရုပ်ရှင် ပြချင်လိုက်တာ။ အသင်လောက အကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းကြီးသိပါပြီ အသင်လောက၊ လို.ပဲပြောချင်တော.တယ်။ မလုပ်သင်.တာတွေ လုပ်နေကြ၊ လုပ်သင်.တာတွေကို မလုပ်ကြ။ ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ်ထားပြီး၊ ကမ္ဘာ.ဘဏ်တွေမှာ အကြွေးတွေတင်အောင်အထိ ဝိုင်းသုံးနေကြပြီး၊ ဘာအခုမှ ကြောက်ပါပြီလဲ လို.ပြောလိုက်ချင်ပ။
ko thet said... :
တိုင်ကိုတိုင်ရမယ် ဒါမှ ငါတို့ ဝင်ငွေလေးဘာလေးရမှာ ပေါ့ နောက်တခုက တိုင်စရာမလိုတိုင်း သူများအိမ်လျောက်လည်နေရင် အိမ်ရှင်တွေစိတ်ညစ်မှာပေါ့ အရှည်တွေးပါ
wah said... :
Whatever I read,I heard about our country... nothing is good.Fed up of these stupidity.
Very foolish idea of government. The military persons have no brain and they make unnecessary laws for our Myanmar people so that they can squeeze from public whatever they want. That kind of law is notahuman right law.
လူထုကို ရပ်ကွက် အဆင့်က စပြီး နိပ်ကွပ်ဖို့ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းထားတာပါ။ တစ်ရွာတစ်ကျေးက ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင် ပိုပြီးဆင်းရဲပင်ပန်အောင်လုပ်တာပါ။ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ကူးသန်းနေထိုင်လည်ပတ်ခွင့် မရအောင် ချူပ်တည်းထားတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းတိုင်ကြားရတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကို အောက်ခြေက အစ ဖိနိပ်ထားတဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန်ကွက်သင့်ပါတယ်။ လူထုအတွက် အကျိုးမရှိပါ။
ခေါ်ရင်သွား-ခိုင်းတာလုပ်-ခံမပြောနဲ့- ခုံနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ ခါးကျိုးသွားမယ် - ဟဲ- ဟဲ- ဟဲ
ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး - ဟိုမိုကရေစီ ဘာမှတ်နေလဲ ခ ငါးလုံးနဲ့ တွေ့သွားမယ်
ဧည်.စာ၇င်း ဘာကြောင်. တိုင်ကြား ၇သနည်း
ဧည်.သည် လာသောအခါ၊ မိမိအိမ်တွင် သူတစိမ်းတယောက်ေ၇ာက်ရှိနေခြင်းအား၊ သက်ဆိုင်၇ာ ၇ပ်ကွက်အဖွဲ.သို. စာ၇င်းပေး၇ခြင်းသည် မလုပ်မနေ အလုပ်တခုဖြစ်သည်။ သူတစိမ်းဆိုသည်မှာ၊ မိမိတို. မိသားစုဝင် မဟုတ်လျှင်၊ သက်ဆိုင်၇ာ အိမ်ထောင်စုဇယားတွင် ပါဝင်သူမဟုတ်ပါက၊ မည်မျှပင်ဆွေမျိုးတော်စပ်နေပါစေ၊ ဧည်.စာ၇င်းတိုင်၇မည်.၊ လူတန်းစားပင် ဖြစ်တော.သည်။
ဘာကြောင်.ဧည်.စာ၇င်းတိုင်ကြ၇သနည်း ဆိုသည်ကို မည်သူမျှ တတ်အပ်နားလည်ကြဟန်မရှိပါသော်ငြားလည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာနေကြ၇သော ပြည်သူလူထုမှာ၊ ယနေ.ထက်တိုင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေကြ၇ပေသည်။
ခေတ်တွေ ဘယ်လောက် ပြောင်းပြောင်း၊ စံနစ်တွေဘယ်လောက် လဲလဲ ၊ ဒီ ဧည်.စာ၇င်း ခေါင်းလောင်းကြီးကတော. ဆက်လက်တီးနေကြ၇တုံးပါပဲလား အ၇ပ်ကတို.ေ၇ လို. အော်လိုက်ချင်ပါသေးသည်။
ထိုခေတ်ထိုအခါက၊ ၇ပ်ကွက်ထဲတွင် တခြားအ၇ပ်ကနေ ၇ာဇဝတ်မှု.ဖြင်.၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများ၊ ပစ်မှု.ဆိုင်၇ာဥပဒေများ ကျူးလွန်ခဲ.၇ာမှ၊ အပြစ်ကျခံ၇မည်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသူများ ရှိခဲ.သော်၊ ၄င်းတို.အား ခြေယာခံ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနိုင်ကြ၇န်အတွက်၊ မည်သူမဆို မိမိအိမ်တွင် ညအိပ်ညနေ လာေ၇ာက်သူများ၊ ခေတ္တ ခန တည်းခိုသူများအား၊ သက်ဆိုင်၇ာသို. စာ၇င်းပြုစု တင်ပြ၇မည် ဆိုသည်. ဥပဒေ ထွက်ဆိုခဲ.ခြင်းဟု အကျွန်ုပ် ယူဆပေသည်။ ထိုခေတ်က ထိုလုပ်၇န်မှာ မှန်ကန်ခဲ.သည်။
ထိုခေတ် ထိုအခါက၊ ၈ျို ဒု settlite လည်းမပေါ်သေး။ ကွန်ပျုတာလည်းမပေါ်သေး။ ကြိုးမဲ.ဆက်သွယ်ေ၇း wireless communication တွေလည်း မပေါ်သေး။ ဒစ်၈ျီတယ် digital ဆက်သွယ်မှု.ဆိုင်၇ာ တို.လည်းမပေါ်သေး။ ဧည်.စာ၇င်းတိုင်ခြင်းသည်၊ ယုတ္တိ ရှိပေမည်။ ကမ္ဘာ. တက္ကနော်လော်ဂျီ ပညာ၇ပ်များလည်း ပြောင်းလဲ တိုးတက်နေပြီ မဟုတ်ပါလား။
ယခုခေတ်တွင်၊ တိုးတက်နေသော လက်နက်ကိ၇ိယာများတို.ကို သုံးဆွဲနေပါလျှက်နှင်. အဘယ်.ကြောင်.ခေတ် နောင်ပြန်ပြေးဆွဲ နေကြပါနည်း။ အလုပ်အားနေကြသဖြင်.၊ အလုပ်ပိုများကို ပိုက်ဆံပေးပြီး၊ လုပ်နေကြ၇သလို ခံစား၇သည်။ တကယ်စဉ်းစားကြည်.ပါလျှင်၊ မည်သူက ကိုယ်မသိသော လူတစိမ်းကို မိမိအိမ်ပေါ်တင်ထားပါမည်နည်း။ ဖိတ်ခေါ်ထားပါမည်နည်း။ စားဝတ်နေေ၇းအတွက်၊ သွားလာ လှုပ်ရှား ရှာဖွေနေကြ၇သော ခေတ်၊ ရှားပါးနေသော ခေတ်တွင်၊ ကိုယ်.အိမ်တောင် မနဲရှာဖွေစားသောက်နေကြ၇သဖြင်.၊ လူအပိုတယောက် တင်ထားဖို.၊ မလွယ်ကူနိုင်ပေ။
ဧည်.စာ၇င်းတိုင်နေကြ၇ဲ.နဲ. ဗုံးခနခန ဟိုနေ၇ာကွဲ ဒီနေ၇ာကွဲ ဖြစ်နေကြတာေ၇ာ ဘယ်လိုပြောပါမလဲ။ ဧည်.စာ၇င်းတိုင်နေကြတာပဲ။ ဘာကြောင်. စာ၇င်းမတွေ.ကြသလဲ။ ၇ီစ၇ာကြီး ဟာသကြီး တော.ဖြစ်နေပါပြီလေ။ လိုအပ်သည်.နေ၇ာမှာ သုံးဆွဲ၇မဲ. အင်အားတွေကို မလိုအပ်သည်.နေ၇ာမှာသုံးကြ။ မဟုတ်က ဟုတ်က အတွေးအခေါ်အမှားတွေ ဇွတ်အတင်း ရိုက်သွင်း၊ လူထုကို brain wash လုပ်။ ဆိုရှယ်လစ်တုန်းကလည်း၊ ဒီပုံစံပဲ။ ပပက ဆီတိုး ဆန်တိုး၊ အိမ်ထောင်စု စာအုပ်တွေထုတ်လိုထုတ်။ ဧည်.စာ၇င်းတွေတိုင်ကြ၇။ အခုလည်းပဲ ထိုနည်း၎င်းပါပဲလား။ လူတွေသာတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပြောင်းသွားကြ၊ မူကတော. ဘယ်တော.မှ မပြောင်းနိုင်ခဲ.ကြ။ မွဲနေတာလည်း၊ ကုန်းတောင် ကောက်စ၇ာမရှိ ဆိုသလို၊ တိုင်းပြည်လည်း ပြာကျမတတ်ပါပဲ။ အခုအထိလည်း သင်ခန်းစာ၇ကြပုံ မပေါ်သေး။ မိမိတို.အိပ်တွေလည်း ဖောင်းနေကြပါပြီ။ သင်းချိုင်းထဲအထိတောင်ယူဖို. ဆက်စုနေကြဦးမလားဆိုတာ၊ မေးနေကြပြီဖြစ်သည်။
၇ာထူးတွေ၊ ငွေကြေးဥစ္စာဒနတွေဟာ၊ သင်းချိုင်းထဲမှာ တော. အသုံးချဘို.အခြေအနေ မပေးဘူးဗျ။ လိုက်ပို.ပြီးတဲ.လူတွေပြန်သွား၇င်တော.၊ အနားမှာ ရှိမဲ.သူတွေက၊ မိမိတို.ထက်အ၇င် senior ကျတဲ. သေသူများ၇ဲ. ဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်မှု.ကိုပဲ၊ အားငယ်စွာနဲ. တွေ.ကြ၇မှာဖြစ်တယ်။ သေနတ်လည်း ထားပစ်ခဲ.၇မယ်။ ၇ာထူးလည်းချန်ထားခဲ.၇မယ်။ ယူနီဖောင်းလည်းခေါက်ရိုးကျကျလေး ထားခဲ.ကြ၇မယ်။ ချစ်မြတ်နိုးတဲ. ငွေကြေးဥစ္စာ ဒန၊ ဆွေမျိုးတွေလည်း၊ ကျန်၇စ်ခဲ.မယ်။ မဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ.ကြသူများအတွက်၊ ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခများများပေးခဲ.ကြသူများ ပထမဦးဆုံးတွေ၇မဲ. အဖြစ်စမ်းကလေးတွေ၊ ခေါ်မေးလို.၇၇င်၊ သင်ချိုင်းထဲက၊ ခေါ်မေးချင်းစမ်းသပ။
လူတွေပြောင်းနေသလို၊ မူတွေလည်းပြောင်းသင်.ပါပြီ။ တိုင်းပြည်အတွက်ပါလို. နာမည်ကောင်းအောင်ပြောချင်ပြောပါစေ။ ကိုယ်အိပ်ထဲလည်း နဲနဲပါးပါး ထည်.ချင်ထည်.ကြ ပါစေ။ ပြည်သူတွေ ကောင်းစားပြီး၊ တိုင်းပြည်ဟာ ရွှမ်းရွှမ်းတောက် ပေါများ တိုးတက်ပြီး၊ လူတမ်းစေ. နေနိုင်ကြ၇ပြီး၊ ဆင်း၇ဲသား ပပြောက်အောင် စီမံခန်.ခွဲနိုင်တဲ. အုပ်ချုပ်မှု.အဖွဲ.အစည်းကို ပြည်သူတွေ လိုလားလိမ်.မယ်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ခေတ်ဟောင်းက နာဇီ အကျင်.ဆိုးတွေ ကို ဆက်လက် ကိုးကွယ်နေကြဦးမည် ဆိုပါလျှင်၊ ကျနော်တို.တိုင်းပြည်ဟာ နောက်ထပ် ပြောင်းလဲ နိုင်ဘို. ကတော. လွယ်ပါဦးပါ.မလားလို. တောင် မစဉ်းစားဝန်.အောင်ပါပဲဗျာတို.ေ၇။ နာမယ်လောက်ပေးထားတဲ. ဒီမိုက၇က်တစ် သမ္မတ နိုင်ငံတော. မဖြစ်စေချင်။ ဒီမိုက၇က်တစ် နိုင်ငံနဲ. ညီမျှသော အ၇ည်အချင်းများ တတ်အပ် သေချာစွာ ရှိစေချင်။ ။
ဧည့်စာရင်းတိုင် ရတဲ့ ဥပဒေ တိုင်ပြည်မှာ ရှိနေတုန်းဆိုရင် ဒီလိုဥပဒေမျိုးတွေရှိနေသရွှေ့ တိုင်ပြည်မှာ လူစဉ်မမှီတဲ့ အစိုးရတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မီးမှောင်းထိုးပြနေတာပါ။ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရသည့်ဥပဒေသည်လူစဉ်မမီအစိုးရလက်ထက်တွင်ရှိသည်။ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲတွင်ရှိနေသည်။ ခေတ်ဆိုးကြီးထဲတွင်ရှိသည်။ တိုင်ပြည်မတည်ငြိမ်မှု့ ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ တိုင်ပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်ဆိုရင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရသည် ဥပဒေကို ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး အမဲရောင် နယ်မြေ၊ စစ်တလင်းအောက်တွင် စစ်နယ်မြေထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသည်ကိုထင်ဟပ်စေချင်လို့ဧည့်စာရင်းတိုင်ရသည့်ဥပဒေကို မြတ်နိုးစွာ စစ်တပ်က ဆွဲကိုင်ထားခြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ စစ်တပ် ဘယ်လောက်အသုံးမကျခြင်း၊ ပြည်သူရဲများအသုံးမကျခြင်းကို ပြသရာရောက်ပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်နှင့် လွှတ်တော်တစ်ရပ်လုံး အရှက်မရှိလို့ ဒီဥပဒေကို အတည်ပြုထားခြင်း မထုတ်ပယ် မဖျက်သိမ်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
သိန်းစိန် said... :
မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးကို ခြေချင်းခတ်သည့် ဥပဒေ။
နိုင်ငံသားအားလုံး ရာဇ၀တ်သားဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်တွင်းတွင် လွပ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် မရှိ မရ။
နိုင်ငံသားအားလုံးကို အကျယ်ချုပ် ကြစေ။
very very stupid Thein Sein and groups.